Nyocha: nyocha ndị ahịa | Martech Zone
Nyocha: nyocha ndị ahịa
Tọzdee, Septemba 12, 2013 Thursday, May 7, 2015 Douglas Karr
Voice of Customer (VoC) bụ mkpokọta nghọta n'ime ahịa mkpa, chọrọ, nghọta, na mmasị nweela site kpọmkwem na anọ na-ajụ. Ọ bụ ezie na nchịkọta weebụ ọdịnala na-agwa anyị ihe onye ọbịa na-eme na saịtị gị, nyocha VoC na-aza KWESYR customers ndị ahịa na-eme omume ha na-eme n'ịntanetị. iPerception bụ usoro nyocha nyocha na-arụ ọrụ nke na-eji teknụzụ intercept na ọtụtụ ntụpọ aka, gụnyere desktọọpụ, mkpanaka na mbadamba. iPerception na enyere ụlọ ọrụ aka ịhazi, chịkọta, jikọta ma nyochaa VoC ha
Mgbe m nya ụgbọala m afọ iri, ekpebiri m ịga nnukwu ma ọ bụ ịla. Site na ịhụnanya nna nna m nwere maka Cadillac ya na icheta ngagharị izu ụka ebe ọ kpọpụrụ anyị… azụrụ m Cadillac mbụ m na mbido afọ ahụ. Thelọ ahịa m zụtara n'aka ya bụ ihe ịtụnanya… ruo na ndị ụwa site na nnabata, na onye na-ere ahịa, na ndị ọrụ. Oge ọ bụla m na-eme oge ọhụhụ maka mgbanwe mmanụ (gbanyụọ)